मलेसियामा चम्केपछि दिल्ली डेयरडेभियल्सले गर्यो सन्दीपको प्रशंसा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मलेसियामा चम्केपछि दिल्ली डेयरडेभियल्सले गर्यो सन्दीपको प्रशंसा
काठमाडौं । नेपाली स्टार स्पीनर सन्दीप लामिछाने विश्वस्तरीय बलर हुन् । नेपाली टिमका महत्वपूर्ण सदस्य सन्दीप हाल मलेसियामा जारी आईसीसी टी ट्वान्टी वल्र्डकप छनोट अन्तर्गतको एशिया बीको छनोट प्रतियोगितामा धमाल मच्चाइरहेका छन् ।
जारी प्रतियोगितामा नेपालले लगातार ५ खेल जितेको छ । ती पाँच मध्ये सन्दीप ३ खेलमा प्लेयर अफ द म्याच भए । उनको यो प्रदर्शनबाट उनको आईपीएल टिम दिल्ली डेयरडेभियल्स पनि निकै खुसी देखिएको छ ।
सन्दीपले मलेसियामा पाँच खेलबाट २० विकेट लिएका छन् । त्यस्तै उनले जम्मा १७ ओभरमात्र बलिंग गरेका छन् । उनको यो उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि दिल्लीले प्रशंसामा भनेको छ, ‘ उ अद्वितीय छ, मानिसहरु उसले विकेट लेओस् भन्ने चाहन्छन् । समर्थकहरुको आशा अनुरुप प्रदर्शन गर्न सक्नु आफैंमा सजिलो काम होइन ’ दिल्लीले ट्वीट गर्दै सन्दीपको तस्वीरसहित प्रशंसा गरेको हो ।
Magician with the ball in hand,acaptain's delight!
Our #DD superstar's rise has been phenomenal.#DilDilli #Dhadkega @IamSandeep25 pic.twitter.com/zllUmW2GqI
— Delhi Daredevils (@DelhiDaredevils) October 10, 2018
दिल्लीले बुधबार दुई पटक सन्दीपबारे ट्वीट गरेको थियो । नेपाल र चीनबीचको खेलमा सन्दीपले गरेको प्रदर्शनका बारेमा पनि ट्वीट गरेको थियो । ट्वीटमा भनिएको छ , ‘आर्इसीसी टि-ट्वाण्टी विश्वकपको एसिया छनौटमा हाम्रा जादूमयी खेलाडीका तर्फबाट भएको अर्को ‘प्लेयर अफ द म्याच’ प्रदर्शन !’
Another 'Player of the Match' performance from our wonder kid at the ICC World T20 Asia Region Qualifiers!#DilDilli #Dhadkega @IamSandeep25 pic.twitter.com/N9ETkFAMPk